एक शाही विवाहमा अरबौ खर्च , खाना देखि लुगा सम्मको खर्च हेर्नुस यस्तो छ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एक शाही विवाहमा अरबौ खर्च , खाना देखि लुगा सम्मको खर्च हेर्नुस यस्तो छ
शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२० मा प्रकाशित !
एजेन्सी – शाही परिवारको जीवनशैलीबारे थाहा पाउने चाह सबैलाई हुन्छ । त्यसमाथि शाही विवाहबारे सबैको विशेष चासो हुन्छ । ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारी र अमेरिकी नायिका मेगन मर्केलको विवाह शनिबार अर्थात् १९ मे मा हुँदैछ । यसले संसारको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यी दुइको विवाहमा कति पैसा खर्च हुन्छ ? के–के मा कति पैसा खर्च गरिन्छ त्यसबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ।
शाही विवाह ब्रिटेनको विन्डसर क्यासल चर्चमा हुनेछ । ६ सय पाहुनालाई विवाहमा निम्तो दिइएको छ । पाहुनाको स्वागत त भव्य रुपमा गरिनेछ तर उनीहरुका लागि शर्त लागू गरिएका छन् । विवाहको निम्तो कार्डमा नै पाहुनाका लागि सात शर्त लागू गरिएको छ ।
ब्रिटेनकी विलासी विवाहकी प्लानर एमी डुनीले सीएनबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार राजकुमार ह्यारी र मेगन मर्केलको विवाहमा सुरक्षा खर्चबाहेक २० लाख पाउन्ड (२९ करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्च हुन्छ । सुरक्षाका लागि ३ करोड पाउन्ड (४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने ब्राइडबुकले बताएको छ ।
यी कुरामा यति खर्च हुन्छन्ः
खाना र पेय पदार्थमाः ६ लाख ८० हजार डलर
६ सय पाहुनालाई लञ्च र डिनरको आयोजना गरिएको छ भने २ हजार ६ सय ४० सर्वसाधारणलाई चिया र हट स्न्याक्सको व्यवस्था गरिएको छ जसमा ६ लाख ८० हजार डलर (७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान एमीले गरेकी छिन् ।
‘विवाहमा अत्यधिक स्याम्पेन र ह्विस्की हुनेछ, ह्यारीका लागि म पक्का छु,’ उनले भनिन् ।
ग्लास मार्कीः ४ लाख डलर
विवाहको रिसेप्सनका लागि सिसाले बनाइएको एक भवन निर्माण गरिँदैछ त्यसमा ४ लाख डलर ( ४ करोड ३५ लाख) खर्च हुन्छ ।
लुगाः २ लाख ७० हजार डलर
मर्केल बेलायती डिजाइनर राल्फ एण्ड रस्सोको डिजाइनमा बेहुली बन्नेछिन् । मर्केलले आधिकारिक इन्गेजमेन्ट फोटोसुटमा पनि उनै डिजाइनरका पहिरन लगाएकी थिइन् ।
टेलिग्राफको एक रिपोर्टमा मर्केलको विवाहको ड्रेस १ लाख ३५ हजार डलर पर्ने अनुमान गरेपनि एमीले भने उनको पहिरनमा २ लाख ७० हजार (२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ) पर्ने अनुमान गरेकी छिन् । उनका अनुसार शाही विवाहको मापदण्ड यही हो । यता ह्यारीले भने सस्तो पहिरन लगाउने बताइएको छ ।
मर्केलले बेलुका दिइने रिसेप्सन पार्टीमा पहिरन फेर्ने अनुमान गरिएको छ ।
फूलः १ लाख ३० हजार डलर
विन्डसर क्यासलललाई फूलले सजाउन १ लाख ३० हजार (१ करोेड ४१ लाख) खर्च हुन्छ ।
कसले तिर्छ ?
शाही परिवारले विवाहको मुख्य विषयमा आफैंले खर्च गर्ने बताएको छ । एक वक्तव्य जारी गर्दै चर्च, संगीत, फूल, साजसज्जा र रिसेप्सनको खर्च शाही परिवार आफैंले गर्ने जानकारी दिएको छ ।
मर्केलले विवाहको पहिरनमा आफैंले खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: रोचक बन्यो आइपिएल समीकरण, १ खेल बाँकी हुँदा २ स्थानका लागि ५ टिमको प्रतिस्पर्धा
NEXT POST Next post: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पत्ति तीन अर्ब
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ १३:२०